Isimo sokuqala: izici, imvelaphi kanye nokuziphendukela kwemvelo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isimo esizungeze iplanethi yethu besingahlali sinokwakheka kwamanje. Kusukela ekuqaleni kokwakhiwa kweplanethi yethu i isimo sokuqala ukwakheka kwayo bekuguqukile ngokuhamba kwesikhathi kuye ngezici zeplanethi nezimo zemvelo. Siyazi ukuthi umkhathi awuyilutho olunye ngaphandle kongqimba lwamagesi azungeze umzimba wasezulwini nokuthi bakhangwa kuwo ngamandla adonsela phansi. Zisisiza ukuthi sizivikele emisebeni yelanga ye-ultraviolet, silawule izinga lokushisa futhi sivimbele ama-meteorite angene kwiplanethi yethu.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi ngomkhathi wakudala nokuthi wadalwa kanjani.
1 Isimo sokuqala
2 Izinhla zomkhathi
3 Ukudalwa komoya wokuqala
4 Izinguquko ekubunjweni
Sikhuluma ngamaqoqo amagesi azungezwe yiplanethi yethu ngoba ahehwa isenzo samandla adonsela phansi. Ungqimba lwegesi lokho kusivikela elangeni nokuthi ngaphandle kwalo impilo ibingeke ikhule ngendlela esazi ngayo. Emhlabeni wethu, umkhathi njengamanje wakhiwe yi-nitrogen, i-carbon dioxide, i-oxygen ne-argon. Kancane kancane, yakhiwa ngamanzi, okuyikho okwakha amafu, nezinye izinto ezifana nothuli, impova, izinsalela zokuphefumula nokuphendula komlilo. Siyazi ukuthi umkhathi wethu ungaphezu kwamagesi, uthuli namanzi. Ukube kulo mkhathi impilo emhlabeni ibingenakwenzeka.
Inhloso enkulu ukusivikela emisebeni yelanga ye-ultraviolet nokulawula ukushisa kwayo. Ngaphezu kwalokho, kusisiza ukuvimbela ukungena kwama-meteorite amakhulu emhlabeni wethu. Siyazi ukuthi akuzona zonke izinto ezisemkhathini zamaplanethi ezakha isimiso sonozungezilanga ezifanayo. Kukhona ezinye ezijule njengalezo zikaSaturn, okuyi Inamakhilomitha angama-30.000 ukusuka esisekelweni kuya esigabeni sokugcina. Ngakolunye uhlangothi, leplanethi yethu incane ngokuphindwe kathathu, inamakhilomitha angaba ngu-10.000 XNUMX ukujula.
Iqiniso ukuthi umkhathi uchaza izimo eziningi zomhlaba esihlangana nazo. Zonke zihlukile. Umkhathi wethu unezendlalelo ezi-4 ezihlukile. Sine-troposphere ecebile ngomphunga wamanzi we-oxygen. Kukuyo lapho iningi lezimo zezulu esizaziyo zenzeka, kufaka phakathi izimvula, imimoya neqhwa. Ukuze ufinyelele lokhu kuphakama ekugcineni kwe-troposphere udinga indiza ekhethekile ekwazi ukufinyelela ezindaweni eziphakeme kakhulu.
Isendlalelo sesibili somkhathi saziwa njenge-stratosphere. Yindawo eyomile lapho kungenazimo zezulu. Izindiza azikwazi ukufika lapho njengoba kungekho moya owanele wokuzixhasa. Noma kunjalo, amabhaluni omoya ashisayo angafika. Zilandelwa yi-mesosphere. Ungqimba lapho kudlula khona izinkanyezi zokudubula. Lapho sifuna ukubona abazingeli abajwayelekile, kufanele sazi ukuthi badlula kwi-mesosphere. Ziyi-meteoroid eye yahlakazeka esigabeni sokugcina somkhathi futhi yadlula lapha.
I-thermosphere ungqimba lokugcina lomkhathi womhlaba lapho kuvela khona iLights Lights bese kuzungeza i-shuttles. Ekugcineni, kukhona i-exosphere. Kuyinto eyodwa, kanye nezinye izingqimba, evikela impilo yasemhlabeni ngokungajwayelekile. Umsebenzi wayo omkhulu leyo yokuzivikela emisebeni ye-gamma evela elangeni.
Ukudalwa komoya wokuqala
Isimo sokuqala yadalwa cishe eminyakeni eyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-4.500 edlule. Inqubo yokwakheka komkhathi wasendulo ingahlukaniswa ngezigaba ezi-4. Into yokuqala okufanele uyikhumbule ukuthi bekungahlali kuyindawo ekahle yokwakheka kwempilo. Iplanethi yethu ibingenayo le ndawo ekahle yokuthuthuka kokuphila. Umhlaba u-4.500 owedlule wawuyiplanethi esebenza kakhulu ngokuma komhlaba. Kwakunokuvela okukhulu kwentaba-mlilo okwakuphethe ukudala isimo sokuqala. Lo mkhathi wawunomphunga wamanzi, isikhutha, isibabule ne-nitrogen. Kuleli qophelo ekwakhekeni komkhathi wakudala, umoya-mpilo wawungekho ngokulambisa futhi zazingekho izilwandle.
Esigabeni sesibili sokwakheka siyabona ukuthi, njengoba iplanethi iphola, umhwamuko wamanzi ungaminyanisa futhi ubike olwandle kwazise lina isikhathi eside. Ngenkathi amanzi ewa, i-carbon dioxide yasabela ngamatshe kuqweqwe lomhlaba ukudala ama-carbonates. Lawa ma-carbonate abalulekile ekwakhekeni kwempilo nokuthi ulwandle lube nosawoti njengoba kunjalo nanamuhla.
Isigaba sesithathu senzeka cishe eminyakeni eyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-3.500 edlule. Yilapho amabhaktheriya avela khona, ayakwazi ukwenza i-photosynthesis. Ukusho, la magciwane ayakwazi ukukhiqiza umoya-mpilo. Lokhu kukhiqizwa komoya-mpilo kwasiza ekuthuthukiseni impilo endaweni yasolwandle. Lapho nje umoya usunomoya owanele, kwaqala isigaba sesine. Kulesi sigaba sithola umkhathi nesethi yokuhlukahluka okuningi kwemvelo okunesibopho sokwakha izimo ezidingekayo zokuvela kwezinto eziphilayo ezinkulu. Kukho konke lokhu kuziphendukela kwemvelo, kuzalwa izilwane ezikwazi ukuphefumula umoya.
Ukuqanjwa okuhlukahlukene kusuka emkhathini wakudala kuze kube sekubuseni kweplanethi yethu kuye ngesikhathi sokuma komhlaba esizithola sikuso. Sikhuluma ngokwakhiwa okuhluka phakathi kwesibhakabhaka ngokuncipha kwephesenti lomoya-mpilo ngokulingana namanye amagesi. I-nitrogen ibilokhu ikhona njengoba iyigesi ebhekwa njenge-inert ngoba ayisebenzi noma kunzima kakhulu ukuba asabele.
Ngale ndlela, siyakwazi ukufinyelela emkhathini wamanje oqukethe amagesi akhiwe esigabeni ngasinye sangaphambilini esixoxe ngaso. Lawa magesi agcinwa ngokuhamba okuqhubekayo okwenziwa yimimoya nezimvula. Imoto enkulu yomoya yimisebe yelanga evela elangeni edala ushintsho ekuminyaneni kwawo. Ngenxa yalezi zinto ezisemkhathini, abantu nezinye izinto eziphilayo bangaphefumula. Ngaphandle kwala magesi ngabe akukho mpilo emhlabeni.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngomkhathi wakudala nokwakheka kwawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Isimo sokuqala